ဆွန်ဇူး Sun Tzu | ဗန်းမော်သား
Home > Sun Tzu	> ဆွန်ဇူး Sun Tzu
ဆွန်ဇူး Sun Tzu
စွန်းဝူကို ဘီစီ ၅၀၀ (ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ် ၅၀၀) ခန့်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ထင်ရှားသောအမည်မှာ ဆွန်ဇူး ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကွီပြည်နယ်သားဖြစ်သည်။ ဆွန်ဇူးသည် သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း အားရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ဘီစီ ၄၇၆ – ဘီစီ ၂၂၁ အတွင်း ပြည်နယ်အချင်းချင်း စစ်ခင်းနေကြသော ခေတ်တွင် ၀ူ (Wu) ပြည်နယ်၏ မင်းမှုထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၀ူပြည်နယ်၏ မင်းသား ၀ူဟေလူသည် ဆွန်ဇူး၏ ကျော်ကြားလှသော အခန်း (၁၃)ခန်းပါသော စစ်ပညာကျမ်းအား ဖတ်ရှု ၍ လက်တွေ့လေ့လာပြီးနောက် ဆွန်ဇူးအား ၀ူတပ်မတော်၏ စစ်သူကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့၏။ ဘီစီ ၅၀၆ အတွင်း ဇု (Zu) ပြည်နယ်က ၀ူပြည်နယ်အား လက်အောက်ခံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်အား မကြေနပ်သဖြင့် ဆွန်ဇူး၏၀ူတပ်မတော်သည် ဇု ပြည်နယ်အား ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် စစ်ချီတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဆွန်ဇူး၏၀ူတပ်မတော်မှ အောင်ပွဲခံပြီး ဇုပြည်နယ်၏ မြို့တော် ယင်-ဒူ (Yin-Du) အား သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဇုပြည်နယ်၏ဘုရင် ဇာအို (Zhao) မင်းမှာလည်း တိုင်းပြည်အားစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း ဆွန်ဇူးကွပ်ကဲသော ၀ူတပ်မတော်သည် ကွီ (Qi)၊ ကွင် (Qin)၊ နှင့် ယူး (Yue) စသော ပြည်နယ်များအား ဆက်တိုက် သိမ်းယူ နိုင်ခဲ့သည်။
စာအုပ်မှာ သေးငယ်သော်လည်း စစ်၏အခြေခံ အနှစ်သာရ ဥပဒေသတို့အား တိကျစွာဖော်ပြထားသည့်အပြင် ကျယ်ဝန်း နက်နဲသော အကြောင်းအရာ များအား ခြုံငုံမိသည်။ စစ်ရေးစစ်ရာဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများနှင့် အကြောင်းအရာ အားလုံး အကျုံးဝင်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းင်းတို့အား မည်သို့ ဖြေရှင်း ၍ အောင်မြင်နိုင်သည်တို့အား ရှင်းလင်းသော အမြင်ဖြင့်တင်ပြထားသည်။ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း တွင် အခန်း (၁၃) ခန်း ပါဝင် ၍ စစ်၏အခြေခံဥပဒေသ တို့အား တိတိ ကျကျ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း တွင် အခန်း (၁၃) ခန်း ပါဝင် ၍ စစ်၏အခြေခံဥပဒေသ တို့အား တိတိ ကျကျ ဖေါ်ပြထားသည်။ စစ်ဘက်စည်းကမ်း ထိမ်းသိမ်းရေး၊ အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့ရေး၊ စစ်မဟာဗျူဟာ၊ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ သံတမာန်ရေး ပရိယာယ်၊ စစ်မြေပြင် အမျိုးအစား၊ သူလျှိုနှင့် ထောက်လှမ်းရေး စသည့် အခန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ –
၂)စစ်ပွဲဆင်နွှဲခြင်း (Waging War)
၃)စစ်မဟာဗျူဟာ ထိုးစစ် (Offensive Strategy)
၆)အားသာချက်၊ အားနည်းချက် (Weakness and Strengths)
၈)ကိန်းရှင် ကိုးခု (The Nine Variable)
၁၁)အခြေအနေ ကိုးမျိုး (The Nine Varieties of Ground)
၁၂)မီးနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း (Attack by Fire)
၁၃)ထောက်လှမ်းရေး (Employment of Secret Agents) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဆာ ဘာစီ၊ ဟင်နရီ၊ လစ်ဒယ်ဟတ် (Sir B. H. Liddel Hart) (၁၈၉၅-၁၉၇၇) အမည်ရှိ ဗြိတိသျှ စစ်ပညာကျွမ်းကျင်သူက “စစ်အတတ်ပညာ အရာ၌ ဆွန်ဇူးအား မီသူမရှိပါ။ ကားလ်၊ ဗွန်၊ လော့ဝစ်ဇ် ပင်လျှင် ထွင်းဖေါက်သိမြင် နှံ့စပ်သည့်အရာ၌ ဆွန်ဇူးအား မယှဉ်နိုင်ပါ” ဟူ ၍ မှတ်ချတ်ချခဲ့ဖူးသည်။ သေနင်္ဂဗျူဟာ စစ်ရေးစစ်ရာ ဖြင့်ပတ်သတ်၍ ကားလ်၊ ဗွန်၊့ လော့ဝစ်ဇ် (၁၇၈၀-၁၈၃၁)၊ ဘာစီ၊ ဟင်နရီ၊ လစ်ဒယ်ဟတ် အစရှိသော စစ်ပါရဂူတို့ရေးသားခဲ့သော စစ်ကျမ်းအဆူဆူရှိသော်လည်း ဆွန်ဇူး၏ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း ကဲ့သို့ တည်တံ့မှန်ကန်စေရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြချေ။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့စစ်ပညာဖြင့် ပတ်သတ်ပါက ဆွန်ဇူးအား ချန်လှစ်၍မရချေ။ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ် နှင့် ဂျာမဏီ အစရှိသည့် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ စစ်တက္ကသိုလ်များအားလုံးတွင် ဆွန်ဇူး၏ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း သည် ပြဌန်းကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လကရ၊ ထွေ ၀၀၁၀ အနေဖြင့်တွေ့ နိုင်သည်။
ဆွန်ဇူး၏ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း ဂျပန်ဘာသာပြန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အေဒီ ၆၁၈-၉၀၆ ကာလ တန်မင်းဆက် လက်ထပ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၆ရာစု၌ ထင်ရှားသော ဂျပန်စစ်သည်တော်ကြီး တာကာဒါရှင်ဂျင်း (Takeda Shingen) ၏ စစ်အောင်လံများ ၌ ဆွန်ဇူး၏ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်းလာ စာသား အချို့အား ရေးထိုးထားသည် အားတွေ့နိုင်သည်။ ဥရောပတိုက်သို့ ၁၇၇၂ ခုနှစ်တွင် ခရစ်ယန် ဘုန်းတော်ကြီး ပဲရယ်အယ်မိုက် (Pere Amoit) သည် တရုတ်ဘာသာမှ ပြင်သစ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နပိုလီယန် သည်ပင်လျှင် ဤကျမ်းအားဖတ် ရှုခဲ့လိမ့်မည်ဟု ပညာရှင်တို့မှ ယူဆကြသည်။ ရုရှားဘာသာသို့ ၁၈၀၀ ခုနှစ်တွင်ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဗြိတိသျှစစ်ဗိုလ် ကားလ်သရော့ပ် (Capt E, F. Calthrop) မှဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှပြတိုက်မှုး လီယွန်နယ်ဂိုင်းစ် (Lionel Giles) မှ တရုတ်ဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တရုတ်စာပေပညာရှင် ချိန်လင်း ဘာသာပြန်သောကျမ်း နှင့် တန်ဆီချန်း ဘာသာပြန်သောကျမ်း ဟူ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လေ့လာ နိုင်သည်။ ဆိုင်ချိချွန်း ဘာသာပြန်သော ကျမ်းအားလည်း ထိုင်ဝမ်ထုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ စင်္ကာပူ စထရိတ်တိုင်း သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ လုံဝေကန် မှတည်းဖြတ်၍ စင်္ကာပူတွင် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဆက်လက်ဖေါ်ပြမည့် ဥပဒေသများသည် တိုတောင်းလှသော အချိန်ကာလအတွင်း တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံ များအရ လုပ်ငန်းခွင် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အချို့အား ဦးစားပေး ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျယ်ပြန့်လှသော စီးပွာရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ဆွန်ဇူး၏ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း တစ်ဆောင်လုံးဖြင့် ချိန်ထိုးသုံးသပ် တင်ပြရန်မှာ ကျွန်တော်၏ စွမ်းနိုင်သော လုပ်ငန်းတစ်ခု မဟုတ်ပါချေ။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေး၌ စစ်ရေး မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ သဘောတရားများအား မည်သို့ အသုံးချသည် တို့အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာဆွေးနွှေး တင်ပြထားသော နိုင်ငံတကာ စာတမ်းများ အား လေ့လာရန် အစပျိူးဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်၍ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလောကနှင့် စီးပွားရေးဈေးကွက်တို့အား လေ့လာရာတွင် ဆွန်ဇူး၏ အဆိုအမိန့်များသည် အလွန်မှန်ကန်လှကြောင်း တွေ့ရ၏။ ဂျပန်တို့၏ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအား သုံးသပ်ရာတွင် ဆွန်ဇူး၏ သေနင်္ဂဗျူဟာစစ်ပညာကျမ်း အားချန်လှစ်ထား၍ မဖြစ်ချေ။
What I want to say ?ချင့်ချိန်တတ်ပါ
သဘောတရားတစ်ခု၏ မှန်ကန်မှုအတိုင်းအတာသည် သင်၏နားလည်သဘောပေါက်မှု အပေါ်တွင် မှီခိုလျှက်ရှိသည်။ ယေဘူယျ ဆိုလိုရင်းနှင့် ဆိုလိုသည့်အခြေအနေအား နားလည်တတ်ရန်လို၏။ ၎င်းသည်ပင်လျှင် ဥာဏ်ပညာဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ တန်ဖိုးထားသည့် အကြောင်းအရင်းပင်ဖြစ်သည်။ “နေမကောင်းလျှင် ဆန်ပြုတ်သောက်ရမည်” ဆိုသည်မှာ လူနာတိုင်းအတွက် မဟုတ်ချေ။ ချင့်ချိန်တတ်ရန်လိုသည်။
ကမ္ဘာအား ကိုင်လှုပ်ခဲ့သော အတွေးအခေါ် အချို့ သည် တစ်ယောက်တည်း အလုပ်လုပ်သော လူများထံမှ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ယောက်တည်းလုပ်ရသော လုပ်ငန်းမျိုးရှိသကဲ့သို့ စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ရသော ကိစ္စများလည်းရှိ ပါသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်သူကြီးများ” စာစုသည် တကိုယ်တော် ပုဂ္ဂိုလ်များ အားဆိုလိုရင်း မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် အကြီးအကဲ တာဝန်ယူ ထားရသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အား စစ်သူကြီး တစ်ယောက်၏ တာဝန်ဖြင့် တင်စားဖေါ်ပြလိုရင်းပင်ဖြစ်သည်။
TQM (Total Quality Management) မှာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ကိုင်ဇင်း (Kaizen) ဟုခေါ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ပါဝင်သူအားလုံး အရည်အသွေးတိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်၍ အောင်မြင်မှုအား ရယူသည့် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ၏ကံကြမ္မာသည် ဦးဆောင်သူ အကြီးအကဲ၊ သို့မဟုတ် Boss ၏ အဆုံးအဖြတ် နှင့် အရည်အသွေးအပေါ် ၌ မူတည်လျှက်ရှိသည်အား ယုံမှား သံသယ ဖြစ်ဖွယ် မရှိချေ။
“မှားယွင်းမှုတစ်ခု၏ တရားခံသည် အကြီးအကဲ ဖြစ်သကဲ့သို့၊ အောင်မြင်မှု၏ အရင်းအမြစ်သည် ပါဝင်သူအားလုံး၏ စွမ်းဆောင်မှုဖြစ်သည်မှာ” သင်၏ရွေးချယ်ခွင့် မဟုတ်ချေ။ —
အခန်း ၈ ၊ အခန်း ၉ ၊ အခန်း ၁၀ ၊ အခန်း ၁၁ ၊ အခန်း ၁၂ ၊ အခန်း ၁၃
စီမံကိန်း(Project) များသည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးလှသော ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု ဆောင်ရွက်ရာတွင် စဉ်းစား သုံးသပ်ရန် အခြေခံအချက်များမှာ –
၂။ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ
၃။ လုပ်ငန်း သဘာဝ အခြေအနေ
၅။ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း၊ စည်းကမ်း။
အထက်ပါ အချက် ၅ ချက်အား ကောင်းစွာ နားမလည်လျှင် ရှုံနိမ့်မည်။
* စီမံချက် တစ်ရပ်အတွက် လိုအပ်သော ထောက်ကူပစ္စည်း အားလုံးနှင့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု လုံလောက်စွာ ပြင်ဆင်ထားရမည်။
* စီမံကိန်းသည် လိုအပ်သည်ထက် ရှည်ကြာသဖြင့် အကျိုးရှိဖူးသော အဖွဲ့အစည်းဟူ ၍ မည်သည့်အခါမှ မရှိဘူးချေ။
* စီမံကိန်းအတွက် အကောင်းဆုံး မူဝါဒမှာ လုပ်ငန်းဘက်အား မထိခိုက် မနစ်နာစေဘဲ အောင်မြင်ပြီးစီးရေး ပင်ဖြစ်သည်။
* လုပ်ငန်းဘက်အား အသာစီးရယူခြင်းသည် အထက်ပါ နည်းလမ်းထက်ပို၍ နိမ့်ကျသည်။
အုပ်ချုပ်သူမှ သူ၏ အဖွဲ့အစည်း အပါ် ဒုက္ခပေးနိုင်သော အခြေအနေသုံးရပ်။
1. အချိန်လွဲမှားစွာ အမိန့်ပေးခြင်း မတောင်ရွက်သင့်သေးသော အခြအနေ၌ ဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်ပေးခြင်း၊ မရပ်တန့်သင့်သော အခြေအနေ၌ ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ပေးခြင်း။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆောင်ရွက်သူတို့အား ထူးခတ်၍ ထားခြင်းဟု ခေါ်သည်။
2. ကိစ္စရပ်များအား မသိနားမလည်ဘဲနှင့် ပါဝင်စွက်ဖက်တက်ခြင်း အရာရှိတို့နှင့် ဆောင်ရွက်နေသူတို့အား စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။
3. ပြဿနာများအား ကျွမ်းကျင်မှု မရှိဘဲ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း။ တာဝန်ခွဲဝေခြင်းတို့ ၌ ဝင်ရောက်ချယ်လှယ်လိုခြင်း။ အရာရှိတို့၏ စိတ်တွင် မရေမရာ သံသယဝင်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အောင်ပွဲရရန် အရေးကြီးသည်တို့မှာ –
* ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်အားသိခြင်း
* မိမိအဖွဲ့အစည်းရှိ အင်အား အားအသုံးချတတ်ခြင်း
* အဆင့်တိုင်း ၌ စည်းလုံးညီညွတ်မှု တည်ဆောက်ခြင်း
* မှန်ကန်သော ကျွမ်းကျင်သူအား ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းအား အုပ်ချုပ်ခန့်ခွဲ ရခြင်းသည်
သေးငယ်သော အဖွဲ့အစည်းအား အုပ်ချုပ်ခန့်ခွဲ ရခြင်းနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကား စုဖွဲ့ပုံ အရေး ကိစ္စ။
သိမ်းငှက်သည် သားကောင်အား တိုက်ခိုက် ၍ ထိုးသုတ်နိုင်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် – အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကြောင့်။
မလုပ်နိုင်သော သူကို တာဝန်ကြီးလေးစွာ မပေးရ
ကြံရည် ဖန်ရည်မရှိသူထံမှ လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်မှု မတောင်းဆိုရ။
အခန်း ၈ ၊ အခြေအနေ
ခေါင်းဆောင်အား ဆိုးကြိုးပြုနိုင်သောစရိုက် ငါးချက်။
၁။ ပေါ့ဆလျှင် ရှုံးနိမ့်မည်။
၂။ သူရဲဘောကြောင်လျှင် ရှုံးနိမ့်မည်။
၃။ စိတ်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ်လျှင် အလွဲလွဲ အမှားမှားဖြစ်မည်။
၄။ ဂုဏ်ပသာသန မက်မောလျှင် စော်ကားခံရမည်။
(လုပ်ငန်းခွင် လက်အောက်ငယ်သား များရှေ့ ၌ ကြီးကြပ်သူအား အပေါ်စီးဖြင့် အမိန့်မပေးရ။ မိမိတာဝန်ပေးထားသော ကြီးကြပ်သူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား လုယူရာရောက်သည်။)
အဖွဲ့အစည်း ပုံစံပျက် ၍ ဆုံးရှုံးအံ့ ထိုသူသည် အထင်ပါ အမှားတစ်ခုခုအား ကြူးလွန် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခန်း ၉ ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား
အဖွဲ့ဝင်များ၏ လေးစားယုံကြည်မှု မရမီ အပြစ်မပေးရ။ အမိန့်မနာခံတတ်။
မိမိအပေါ် ယုံကြည် သစ္စာရှိသော်လည်း အပြစ်အားထိရောက်စွာ မပေးတတ်လျှင် ထိုသူတို့သည် တာဝန်အားကြေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရန် ပေါ့ဆကြ၏။
အပြန်အလှန် ယုံကြည်လေးစားမှု တည်ဆောက် နိုင်မှ အောင်မြင်မည်။
အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များသည် တစ်သမတ်တည်း ရှေ့နောက်ညီညွှတ်ပါက အကျိုးထိရောက်၏။ သို့မဟုတ်ပါက အမိန့်နာခံ လေးစားမှုမရ။
အခန်း ၁၀၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
လုပ်ငန်းတစ် ခုသည်အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့် အောက်ပါ နည်းလမ်းများ အတိုင်း အရေးနိမ့်တတ်သည်။
ဤသို့ဖြစ်ပါက အခြားအကြောင်းကြောင့် မဟုတ်ပေ၊ ခေါင်းဆောင်၏ တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းမှုသာ ဖြစ်သည်။
၃။ တပ်ပျက်ခြင်း (လက်အောက်ငယ်သား ညံ့ခြင်း)
၄။ ပျက်စီး ဆုံးရှုးံခြင်း ၅။ ဖွဲ့စည်းပုံပျက်ခြင်း ( အုပ်ချုပ်သူ စိတ်ဓါတ်ညံခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်အား မယုံကြည်တော့ခြင်း)
၆။ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခြင်း(တာဝန်ခွဲဝေမှု စံနစ်မကျ၊ ခေါင်းဆောင် မကျွမ်းကျင်ခြင်း)
အမြင့်ဆုံး အုပ်ချုပ်သာသည် အထက်ပါ အချက်များအား ဂရုစိုက်ရမည်။
အခန်း ၁၁၊ အခြေအနေ
မလိုလားအပ်သော သံသယများ ဝန်းထမ်းများ တွင်လုံးဝ မရှိစေရ။
အောက်ပါ ပညာရပ် သုံးရပ်အနက် တစ်ခုခုအား လျစ်လျူရှု တတ်သူသည် အဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင် နေရာတွင် လုံးဝ မရှိစေရ –
* ဆက်ဆံရေး အတတ်ပညာ
* လုပ်ငန်းအားအထောက်အကူ ပြုသော အချက်များ
* လုပ်ငန်းနယ်ပယ် တွင်းရှိ ယုံကြည်စိတ်ချ ရသော အကြံပေးများအား အသုံးချတတ်ခြင်း။
နောက်ဆုတ် ၍မရသော အခြေအနေ တစ်ရပ်တွင် မိမိအဖွဲ့အစည်းအား အချိတ်အဆက် မိမိ နီးနီး ကပ်ကပ် ရှိစေရန် စီမံရမည်။
လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ခံစစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်နှင့် အခြေအနေပြဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းအား အာရုံစိုက်ထားရမည်။
ဝန်ထမ်းတို့အား အားတက်စေခြင်းဖြင့် အလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် ခွန်အားပြည့် တက်ကြွနေစေရန်ဆောင်ရွက် ထားရမည်။
လျှင်မြန်ခြင်းသည် ဆောင်ရွက်မှု၏ အနှစ်သာရပင်ဖြစ်၏။
အခန်း ၁၂၊ မီး
ကောက်ကျစ်သော သဘောဖြင့် စီးပွားဖက်အား မရှုးံနိမ့်စေရ။
အကယ် ၍ လိုအပ်သောကြောင့် အသာစီးရယူပြီးပါက ပျက်စီးခဲ့သော ဆက်ဆံရေးအား ပြန်လည်ထူထောင်ရန် မလွယ်တော့ချေ။
အခန်း ၁၃၊ သတင်းစုဆောင်းမှု
လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အတွင်းရှိ သတင်းအချက်အလက်များအား ကြိုတင်သိရှိထားရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
သတင်းအချက်အလက် ရရှိစူဆောင်းရေး စစ်ဆင်မှုထက် မည်သည့်အရာမျှအရေးမကြီး။ အကယ် ၍ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါက သတင်းအချက်အလက်အား အသေးစိတ် တိတိကျကျ သိရှိထားရမည်။
မူရင်းဆိုဒ်။ ။ http://tinwinaung.blogspot.com/2010/08/sun-tzu.html